Yedu Nyaya - Chengdu Xinzi Mvura Clothing CO., Ltd.
Nhanganyaya Xinzi Mvura
MuXinzi Mvura, vese vagadziri vedu vakaongorora kakawanda kuti vagadzire kumwe kuvapo kwakanaka sekunge vanodudzira mashiripiti, vakadudzira zvakakwana chiratidzo chemufananidzo, uye vakabaya simba remweya mupepa, uye kuyedza kuzviita kuti zvive zvechokwadi.
MuXinzi Mvura, rese redu rakagadzirwa bhurezha ibasa reunyanzvi kupfuura bhurugwa.
Chidimbu chega chega cheXinzi Mvura yechinhu chinhu chinoda akawanda akasiyana manyorerwo echinyorwa kubva dhizaini dhizaini kusona, uchishandisa akasiyana zvinhu uye michina yehunyanzvi kupedzisa izvo.
Mamwe mabhureki ekumusoro-soro kana akaomarara anotodhura nguva yakawanda kungosona. Kunyangwe iri kugadzirwa kweplate kana kusona, hunyanzvi hwakanyanya kwazvo.
Xinzi Mvura inotsanangura runako nderwewe, inonzwisisa mifungo nezvinodiwa zvemukadzi wese anoda runako
Nhanho yega yega yekusona inoda hunyanzvi hwakanyanya. Shure kwechikamu chega chega cheXinzi Mvura yakakwira-tsananguro yemukati ibasa remhizha yega yega.
Tsono uye tambo ingori hunyanzvi hwehupenyu. Ivo mhizha vanoramba vachigara nhaka hunyanzvi hwepamusoro hwekusona zvipfeko zvemukati, vanotevedzera maitiro echiratidzo, uye kusona zvidimbu zvemukati-tsananguro yemukati zvipfeko sezvishongo.
Inobata musimboti wounyanzvi hwayo uye inozviratidza, uye inounza simba kumukadzi wese akapfeka zvipfeko zvemukati zvaXinzi Mvura, kufambira mberi nekuchinja simba rangu, nesimba iri rekuenderera mberi nerudo.